Yemahara Inopindirana Chitima Game | Save A Train
Yemahara Inopindirana Chitima Game
musha > Yemahara Inopindirana Chitima Game
Chitima Game – Dzidzisa Inopindirana Game – Mahara Zvitima Game – Zvitima Simulator – Inopindirana Zvitima
Inopindirana Chitima Game
Enda mukati meinoshamisa nyika yezvitima uye unakirwe neiyi yakasarudzika zvitima simulator mutambo, masekondi mashoma ese chitima chitsva chinosiya chiteshi uye iwe unofanirwa kugadzirisa makwara kune iyo inofamba inofamba chitima, saka inogona kusvika zvakachengeteka ku kuenda chaiko.
Dzidzisa Mitemo Mitemo
Iyi mimwe mitemo, mirayiridzo, uye maficha eedu emahara Zvitima Game:
Dzvanya Tamba kumusoro kuruboshwe kwemutambo wechitima.
Wobva wadzvanya wobva wadzvanya Kutanga pakati pemutambo screen.
Unogona kuchinja zvitima mepu.
Chitima chega chega chine nhamba pazviri uye chiteshi chechitima chekuenda chinewo nhamba.
The njanji njanji mumutambo uyu unofanirwa kugadziriswa nenzira yekubvumira kupfuura kwechitima kuenda kwachiri kuenda.
Kana iwe ukasvika kurudyi kwaunoenda mune ino Inopindirana chitima mutambo, iwe unowana akanaka mapoinzi.
Kana chitima chako chikasvika panzvimbo isiri iyo muzvitima simulator, iwe unozopihwa zvisina kunaka mapoinzi.
Unogona kufuratira miti iri muTrend yekudyidzana mutambo, ivo vanongoitira kuti mutambo utaridze kunakidze, ivo havana kuburitsa chero zvibodzwa kwauri.
Mutambo uyu wakakodzera vese vakuru nevana vanofarira zvitima.
Yedu chitima simulator mutambo wakasununguka zvachose, unogona kutitsigira ne:
Bhalisa ku blog yedu tsamba yekutumira
Tenga matikiti ezvitima pa saveatrain.com
Yedu Chitima Simulator Main Screen
Heino sneak preview yeedu Chitima mutambo mutambo peji (mutambo chaiwo uri pazasi), tanga nhasi kuve magineti enjanji.
Kuti utambe mutambo wechitima iwe unofanirwa kubaya Tamba pamusoro kuruboshwe, ndokuzo Kutanga pakati pechidzitiro
Pakupedzisira Yedu Inopindirana Zvitima Game
Hapana Mutambo Chaicho Chitima Nzira
Iyi ndiyo mimwe yemigwagwa mikuru yezvitima yaunowana pane iyo saveatrain.com Website.
UYE ZVIMWE ZVAKAWANDA
Sevha Chitima inogara ichiisa vatengi vayo vafambi uye vanodzidzisa vafambi pamberi pekambani purofiti, tinotenda izvi pave nani chisungo pakati pedu uye rutsigiro Save A Train munguva refu, saka isu tinogara tichiedza kugadzira zvinonakidza uye zvinobatsira zvemukati kwauri, nguva ino isu takasarudza kuita yemahara chitima mutambo, saka haubhadhare mumwe mutambo kana chitima mutambo wepurogiramu uye zvakare tirangarira isu sekukupa iwe kuvaraidzwa kwemahara 😁 🚆.
Zvino zvawakawana nezve yedu Superb Yemahara Chitima Game, tinotenda unofanirawo kuziva kuti kuwana Best uye CHEAPEST Train Tickets Prices – Iwe unofanirwa kuodha matikiti ako echitima ku Save A Train.
Unoda embed peji ino pana yako nzvimbo, chete tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-game%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)